कसले दियाे,भरतपुर उपप्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
कसले दियाे,भरतपुर उपप्रमुखलाई ज्यान मार्ने धम्की ?
भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाहले आफूमाथि ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएकी छिन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको सचिवालयले चलाउँदै आएको फेसबुक म्यासेन्जरमा ‘स्वप्नील सुवेदी’ नामको आइडीबाट ज्यान मार्ने धम्की दिइएको उपमेयर पार्वती शाहले बताएकी हुन्।
उपमेयर शाहका अनुसार ५ दिनअघि म्यासेज आएकाे र सतर्क गराउनका लागि म्यासेज पठाइएकाे बताएकाे छ। 'धम्की आउनु २ दिनअघि मात्रै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीसँग भनाभन भएकाे थियाे। उहाँले कार्य सम्पादनका क्रममा जनप्रतिनिधिलाई नगन्ने, म आफैंलाई 'मेयरका अघि तपाईं काे हाे?' भन्नेजस्ता अमर्यादित शब्दहरु बाेल्नुभयाे', शाहले भनिन्, 'धम्की आएपछि पनि मेयर तथा महानगरबाट कुनै पनि किसिमकाे गम्भीरता नदेखाइएकाेले म मिडिया समक्ष आएकी हुँ।'
उनले बुधबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा आफूलाई आएकाे धम्कीबारे जानकारी गराएकाे बताइन्। 'अनेरास्ववियू, युवा स‌ंघजस्ता संगठनकाे नाम लिइएकाे छ। चेतावनीपूर्ण भाषामा यसपटक सतर्क मात्रै गराएका हाैं भनिएकाे छ', शाहले भनिन्, 'सुरक्षा संवेदनशिलतालाई मध्येनजर गर्दै प्रहरीमा बताएकी छु।'
उपमेयरलाई आएकाे धम्कीप्रति महानगरले गम्भीर भएको भन्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने जनाएकाे छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगर उपप्रमुख तथा कांग्रेस नेतृ शाहलाई आएकाे ज्यान मार्ने धम्कीप्रति आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिका रूपमा सामाजिक काम गर्दैगर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने प्रवृत्तिले मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
कुनै पनि बहानामा यस्ता धम्की तथा मनोबल गिराउने काम नगर्न/नगराउनसमेत पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेकाे छ।
यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ। आउँदा दिनमा यस्ता घटना नदोहोर्‍याउनसमेत विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।